गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA/NCC लेवानोनको अधिवेशन सम्पन्न - Pardeshi Khabar
नेरुता मोक्तान/२३ अगस्ट, लेबानोन। ३ दिन अघि मात्रा लेबनान दाउरा स्थित गैर आवासीय नेपालीहरूको संस्था (NRNA) लेबनान को छैठौँ महाधिवेशन र नेपाली हिन्दू नारीहरूको महान चाड तीज एकै पटक भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । विगतमा पनि मलाई सहभागिताका निमित्त पटक-पटक निमन्त्रण नआएको त होइन तर यस पटक चाही कार्यक्रममा हेर्ने उदेश्यले मात्रा भए पनि म बिहानै कार्यक्रम स्थल तर्फ हानिए । म शायद कार्यक्रममा अलिक छिट्टै पुगे छु कि नेपालीहरू आउने क्रम जारी नै थिए । सुरुमा मलाई अलिक पट्यार लागेर झन्डै कार्यक्रम नै छोडेर घर फर्कौं की भन्ने सोच सम्म बनाएको थिए तर जब कार्यक्रम सुरु भयो तब म पनि रम्न पुगे छु ।
रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेर आफ्नो अमूल्य ज्यान गुमाएका नेपालीहरू र प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प तथा अविरल वर्षाले निम्त्याएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु वरण गरेका नेपालीहरू को सम्झनामा पाँच मिनेट मौनधारणका साथ उद्घोषकले औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु भएको उद्घोष गरेका थिए ।
विश्वमा जहाँ पुगे पनि नेपालीहरू माझ देशभक्तिको भावना जगाइ राख्न छातीमा हात राख्दै राष्ट्रिय गाना बजाउँदै उपस्थित सबैले एकै स्वरमा आफ्नो राष्ट्र प्रतिको समर्पणमा राष्ट्रिय गाना गाएका थिए ।
त्यसपछि उद्घोषकले अतिथिका आसन ग्रहण बाट कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएका थिए ।
छविलाल लामिछानेको सभा अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधि एबम विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले समेत अतिथिका आसन ग्रहण गरेका थिए ।
आसन ग्रहण लगतै तीज विशेष सुभ-कामना सहितको सङ्गीतमा सङ्घका नव निर्वाचित सदस्य सुन्दरी तामाङ दोङले दर्शकहरूलाई उठाउने सम्मनका आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरेका थिइन । दोङको दर्शकहरूको आलस्यतालाई भुलाउने नृत्य पछि कार्यक्रम लाई अधिवेशन तर्फ बढाइएको थियो ।
अधिवेशनको दौडानमा अध्यक्षमा अशोक थापा सहित १३ जना कार्यसमितिको निर्विरोध नव-कार्य समितिमा चयन भएको थियो भने नव-निर्वाचित कार्यसमिति लगायत अतिथि वर्ग सबैलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान पनि गरिएको थियो ।
निर्वाचित कार्यसमितिको नामावली निम्न प्रकार रहेको छ:-
अध्यक्ष: अशोक थापा
उपाध्यक्ष: छविलाल लामिछाने
महासचिव : धरर्मन्द्र दाहाल,
सचिव: छिरिङ्ग सेर्पा,
कोषाध्यक्ष: हेमचन्द्र मगर,सह- कोषाध्यक्ष: रामसिङ्ग तामाङ, युवा संयोजक: अर्जुन अधिकारी, महिला संयोजक: रमा ढकाल र सदस्यहरूमा नरेश लामा,
तत्पश्चात् कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण नेपाली दिदी-बहिनीहरू नाचगानमा झुमिरहेका थिए तर म भने कार्यक्रममा सहभागी जनाइनुको उदेश्य नाचगान हेर्न मात्रै नभएर लेबनानमा रहेका दश हजार भन्दा बढि नेपालीहरूको बारेमा केही कुरा बुझ्ने सिलसिलामा थिए । केही क्षण अगाडि आसन ग्रहण मञ्चमा सँगै बस्ने क्रममा नव निर्वाचित उपाध्यक्ष लामिछाने र १३/१४ जना अध्यक्ष तथा समाज सेवी देवी लिम्बू सँग परिचय भएको थियो ।
सबै भोजन र नाचगानमा व्यस्त हुन लागेपछि म र पूर्व अध्यक्ष देवी लिम्बू चाही हल बाहिर निस्केर गहन रूपमा भलाकुसारी गर्न तर्फ लाग्यौं ।
उहाँको गृह जिल्ला झापा रहेछ र लेबनानमा दुई दशक लामा समय पार गरे सकेकी रहे छिन । एक आपसको परिचय सँग-सँगै हाम्रो कुराकानीलाई सामाजिक विषय तर्फ मोड्यौ । वहाँकै अनुमतिमा मैले केही प्रश्नमा सोधेकी थिए “हजुर पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाई को कार्यकाल कस्तो रहयो त ?” मेरो प्रश्न थियो । जबाफमा उनले लेबनान एक द्वन्द्व ग्रस्त देश हो र यो आफैमा राजनीति उथलपुथल रहेको देशमा संस्था चलाएर नेतृत्व गर्न त्यति सहज छैन।” उनले बताइन्।
नेपाल र लेबनानको राजनीतिक उथलपुथलको बावजुद पनि नेपाल दूतावास काइरो, लेबानिज सरकार र आफ्नो संस्था एनआरएनको संयुक्त नेतृत्वमा समस्यामा परेका १०० भन्दा बढि नै महिलाहरूको उद्धार गरेर नेपाल पठाइएको पनि उनले बताइन् । नेपाली कन्सुलर समेत नभएको देशमा लगभग दश हजार नेपाली कामदार रहेको उनको भनाइ छ। यति धेरै नेपाली कामदार यदि कोही समस्यामा परे दुख पोख्ने कुनै ठाउँ सम्म छैन उनले थप्दै भनिन।
त्यसपछि दोस्रो प्रश्नमा मैले सोधेकी थिए अधिकांश घरेलु कामदार महिलाहरू जो भागेर गैरकानुनी रूपले काम गरिरहेका छन् । त्यस्तो खालको महिलाहरूको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
उनले भनिन् “समस्यामा परे हामीलाई खबर गर्न सकिन्छ पुलिस अथवा कुनै संघ संस्थामा जानकार गराउन सकिन्छ तर भाग्नु आफैमा गलत ठहर्छ ।”
उनले आफू पनि इकामा होल्डर भएको कुरा बताउँदै भागेका महिलाहरू लाई मद्दत दिन खोजेमा लेबानिज कानुन विपरीत कार्य हुने र आफूलाई समेत देश निकाला गर्न सक्ने जोखिम पूर्ण कार्य भएको हुँदा भागेर गैरकानुनी रूपले काम गरि हेकाहरूको समस्या समाधान गर्न त्यति सहज नभएको बताइन् ।
प्रश्न नम्बर तिनमा मैले प्रश्न राखेकी थिए केही महिना अगाडि एनआरएन मै आबद्ध दुई नेपाली महिला
रोजि लिम्बू र सपना राना पक्राउ परिन उनीहरूलाई ५५ दिन जेलमा राखियो र नेपाल फर्काइएको थियो तर नेपाल पुगे लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरिन र एनआरएन ले नै फसाएको भनी तपाइहरूको नाम जोडिएर मिडियामा आयो खास वास्तविकता चाहिँ के थियो त ? देवीले आफू लगायत एनआरएन संस्थाको कुनै संलग्नता नरहेको र व्यक्तिगत रिसीबिलाइ लिएर संस्थाको बदनाम गर्न खोजिएको गुनासो पोखिन ।
पक्राउ पर्नु को मुख्य कारण भागेको महिलाहरूलाई साथ दिएर अपराधी बचाउ गरेको भन्दै उनीहरूको घर साहुले नै उजुरी दिएर पक्राउ पारेको उनको दावी छ।
त्यसपछि : प्रश्न नम्बर चारमा सोधेकी थिए
अहिले पुरानो महिला कामदारलाई पनि सरकारले यहाँ आउन प्रतिबन्ध लगाएको छ नि यो सहि कि गलत ?
उनले एकचोटी गएर फर्केका महिला कामदारहरू फर्किने भने कै जो सँग राम्रो जागिर छ जो सँग समस्या नै छैन भने किन प्रतिबन्ध लगाउने ? यहाँ चालीस पचास हजार कमाइन्छ नेपालमा यति तलव पाउन सक्ने रोजगारको व्यवस्था भएकै छैन अनि हामी नेपाल गएर के गरेर बस्ने त ? त्यसैले पुराना कामदार माथि नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध प्रति त्यति चित्त नबुझेको बताइन् ।
अन्तमा नव निर्वाचित अध्यक्ष थापा सँगको कुराकानी ।
एनआरएन को मुख्य उदेश्य के हो भनी प्रश्न राखेकी थिए ? उनले एनआरएन लेबनान स्थापना हुनुको मुख्य उदेश्य नै यहीँ रहेको घरेलु कामदार महिलाहरूकै सेवा सुविधाको लागि यो संस्थाको स्थापना भएको बताए । साथै देश र राष्ट्रका लागी पनि केही योगदान पुर्याउने उदेश्य रहेको बताए ।
प्रश्न नम्बर दुई मा सोधेकी थिए तपाई को कार्यकालको लागि कार्य योजना पूर्व तयारी कस्तो छ ? उनले नव निर्वाचित कार्यसमितिका सदस्यहरू निकै शिक्षित र जुझारु भएको हुँदा विगतमा भन्दा अझ राम्रो प्रगति गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
वहाँहरू सँगको केही क्षणको भलाकुसारी समाप्त पछि म आफ्नो उदेश्य तर्फ लागे । बाढी पीडितहरूका लागि स्वैच्छिक ले केही आर्थिक सङ्कलन गर्नु पनि मेरो उदेश्यहरू मध्येमा एक थियो । केही एक दुई जान परिचित साथीहरू सँग यस विषयमा प्रस्ताव राखेको मात्रा थिए, साथीहरू ले पनि मेरो प्रस्तावलाई सहर्ष स्विकार्दै आफ्नो सहयोगी हातहरू फैलाउनु भयो । म वहाँहरू प्रति हृदय देखिनै आभारी छु ।
अन्तमा विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिहरू लगायत नेपालीहरूको जोडदार उपस्थित रहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (NRNA) लेबनान को छैठौँ अधिवेशन तथा नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान चाड तीज विशेष कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो र सबै साथीहरू सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छुटिएकि थिएँ ।
नोट: माथी उल्लेखित संवाद परदेशी खबरकी संवाददाता नेरुता मोक्तानले आफै कार्यक्रमस्थलमा उपस्थित भएर तयार पारिएको हो।
« जन-प्रगतिशील मञ्च कुवेतले राहत स्वरुप बाढी पीडितलाई ६८,८८१ रुपैयाँ पठायो (Previous News)
(Next News) नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्यो, एक जनाकै थाप्लोमा २४ हजार »